Hlola uStenhenge, eNgilandi - World Tourism Portal
Hlola uStenhenge, eNgilandi
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeStenhenge
Bukela ividiyo ekhuluma ngo-Stonehenge
Hlola uStenhenge isikhumbuzo se-prehistoric eWiltshire, England, amamayela amabili (3 km) entshonalanga ye-Amesbury. Kuqukethe indandatho yamatshe amile, itshe ngalinye elimile elizungeze izinyawo ze-13 (4.0 m) ukuphakama, amamitha ayisikhombisa (2.1 m) ububanzi futhi enesisindo cishe ngamathani we-25. Amatshe abekwe ngaphakathi kwemisebenzi yomhlaba phakathi kwenkimbinkimbi kakhulu yesikhumbuzo seNeolithic neBronze Age eNgilandi, kubandakanya nezindawo zokungcwaba ezingamakhulu ambalwa.
Izazi zemivubukulo zikholelwa ukuthi yakhiwa kusuka ku-3000 BC kuya ku-2000 BC. Ibhange lomhlaba eliyisiyingi elizungeze umhlaba kanye nomsele, okuyisigaba sokuqala sesikhumbuzo, kubhalwe cishe nge-3100 BC. Ukuqomisana kweRadiocarbon kusikisela ukuthi ama-bluestones okuqala akhuliswa phakathi kwe-2400 ne-2200 BC, yize kungenzeka ukuthi ayekhona endaweni yokuqala kwe-3000 BC.
Enye yezimpawu ezaziwa kakhulu e-United Kingdom, uStenhenge uthathwa njengesithonjana samasiko eBrithani. Bekulokhu kuvikelwe ngokusemthethweni iSikhumbuzo sasendulo esihleliwe kusukela ku-1882 lapho umthetho wokuvikela izikhumbuzo zomlando wethulwa ngempumelelo eBrithani. Isiza nendawo ezungezile yengezwe kuhlu lwe-UNESCO lama World Heritage Sites e1986. Stonehenge liphethwe nguMqhele futhi liphethwe yiNgcebo yamaNgisi; umhlaba ozungezile ungowe-National Trust.
Stonehenge kungenzeka kube yindawo yokungcwaba kusukela ekuqaleni kwayo. Imali efaka usuku lwamathambo omuntu kusukela ekuqaleni kwe-3000 BC, lapho umgodi nebhange kuqala ukumbiwa, futhi kwaqhubeka okungenani eminye iminyaka eyikhulu.